အူမကြီးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ကာကွယ်ခြင်း နှင့် ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အူမကြီးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ကာကွယ်ခြင်း နှင့် ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း
ဧပြီ 18, 2018 Assoc.Prof. Objoon Trachoo, M.D. Pitulak Aswakul, M.D.
အူမကြီးအတွင်းထဲသို့ ကင်မရာဖြင့် လူနာမှာ အူမကြီးကင်ဆာရောဂါရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းထက် မျိုးရိုးဗိဇကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးပြီး ရောဂါကို အဖြေရှာတဲ့နည်းစနစ်က တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အသုံးပြုနေတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မိဘမျိုးရိုးစဉ်ဆက်တစ်ခုမှ နောက်တစ်ခုသို့ ကူးဆက်နိုင်တဲ့ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိလို့နေပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ ကင်ဆာအမျိုးပေါင်း ၃၀ ကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ အမျိုးပေါင်း ၅၀ ကို စစ်ဆေးသိရှိနိုင်တဲ့ နည်းပညာများ ပေါ်ထွက်လို့နေပါပြီ။
မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ မိဘမျိုးရိုးစဉ်ဆက်ထဲမှာ အူမကြီးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့သူရှိရင် (ဒါမှမဟုတ်) ရင်သား၊ သားအိမ်၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ ပန်ကရိယ နဲ့ အသည်းခြေပြွန်တို့မှာ ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့သူရှိရင် အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အမျှင်ဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာများ စားသုံးမှုနည်းခြင်း၊ အနီရောင်အသားများ စားသုံးမှုများခြင်းနှင့် အခြားသော လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ inflammatory bowel disease လို့ခေါ်တဲ့ အူရောင်ရမ်းခြင်းတွေက အူမကြီးသွေးတွင်း ကင်ဆာရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရှိခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ အသည်းအဆီဖုံးခြင်း နဲ့ ကိုလက်စထရောများခြင်း စတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားနေရတဲ့သူတွေမှာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားဖို့ အလားအလာပိုများပါတယ်။
“ လူနေထိုင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုခံရတဲ့သူတွေက အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရောဂါတွေနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။” လို့ Samitivej Sukhumvit Hospital မှာရှိတဲ့ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းအထူးကုဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ Dr. Pitulak Aswakul က အနောက်နိုင်ငံမှာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လာတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အခုလိုပဲ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုလူမျိုးတွေက အူမကြီးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာစစ်ဆေးမှုကို ခံယူသင့်သလဲ?
အူမကြီးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာစစ်ဆေးမှုက အသက် ၅၀နှင့်အထက် ကျား၊ မ မရွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသက် ၅၀ အောက်ရှိ အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီသူတွေလည်း စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ထိုသူတွေမှာ
မိမိ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ရာဇဝင်မှာ အူမကြီးကင်ဆာရောဂါကို ခံစားခဲ့ရတဲ့သူ ရှိသူများ
ယခင် အူမကြီးရောင်ရမ်းခြင်းကို ခံစားခဲ့ရဖူးသူများ
မိမိ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ရာဇဝင်မှာ အခြားသော ကင်ဆာရောဂါများရှိနေခြင်း
အူမကြီးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော ဆေးစစ်ကုသချက်များ
Screening ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာက အူမကြီးအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ Polyps အလုံးအကြိတ်တွေရဲ့ ကြီးထွားလာမှုကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် နောင်အခါ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားလာနိုင်မှုကို တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ “ အူမကြီးကင်ဆာအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းလာမှုက အရေးပါပါတယ်။ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသော အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေဟာ သေးငယ်တဲ့ Polyps အလုံးအကြိတ်လေးကနေ ရောဂါဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်တယ်” လို့ Dr.Pitulak က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အူမကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ Polyp အလုံးအကြိတ်ဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်း အရွယ်အစားကြီးထွားလာနိုင်ပြီး ကင်ဆာအသွင်သို့ ၃ နှစ်ကနေ ၅ နှစ်အတွင်း ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း Polyps အလုံးအကြိတ်တွေအားလုံးက ကျိန်းသေပေါက် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် Polyp အလုံးအကြိတ်တွေကို အူမကြီးကင်ဆာမဖြစ်ပွားခင် ကြိုတင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ယခုလိုမျိုး အူမကြီးကင်ဆာအတွက် ကြိုတင်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါဝေဒနာရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်ရှိတော့မှ စစ်ဆေးခံရတဲ့ လူနာအရေအတွက်များ လျော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ရောဂါဝေဒနာ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိနေတဲ့သူတွေများအနေဖြင့် အသက် ၅၀ မတိုင်ခင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းများ ခံယူသင့်ပါတယ် ။
Colonoscopy စစ်ဆေးမှုဟာ အူမကြီးကို အဓိကစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီး စအိုမှ တဆင့် Colonoscope ကို ထည့်သွင်းပြီး အူမကြီးတစ်လျှောက်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုဟာ မိနစ် ၂၀ ကနေ ၃၅ မိနစ်အထိ ပျှမ်းမျှကြာနိုင်ပါတယ်။ Polyps အလုံးအကြိတ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ၎င်းတို့ကို ဖယ်ထုတ်ရတဲ့အတွက် အချိန်အနည်းငယ် ထပ်မံကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။
Oncogentic Screening နည်းစနစ်ဖြင့် ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း နဲ့ ရောဂါကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
လူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ၂ သောင်းကျော်ထဲ၌ အမျိုးပေါင်း ၅၀၀ ဝန်းကျင်ဟာ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဆိုပါ ဆက်စပ်နေတဲ့မျိုးရိုးဗီဇများကို အုပ်စု ၂ စု ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။၁) ဆဲလ်ကြီးထွားမှုနဲ့ ပြန့်ပွားမှုတို့ကို ထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့အထိ ပိုမိုကြီးထွားလာအောင် ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Oncogenes ဆဲလ် နှင့် ၂) ပျက်စီးသွားတဲ့ DNA ဆဲလ်တွေကို ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ ကင်ဆာဆဲလ် ပွားမြားစေတဲ့နှုန်းကို နှောင့်နှေးအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Tumourr Suppressor Genes ဆိုတဲ့ ဆဲလ် နှစ်ခုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Oncogentic Screening ဆိုတာကတော့ ဆေးကုထုံးအပေါ် အခြေခံပြီး ကုသတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မှီဆေးစစ်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရုံတင်မက ဆေးကုသနည်းစနစ်အသစ်တွေကိုလည်း ဗဟုသုတများစွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ယခုနည်းစနစ်ဟာ လူနာတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကင်ဆာဖြစ်ပွားလာနိုင်မှုကို စစ်ဆေးကောက်ယူပြီးတော့ ဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့လူနာတွေအတွက် အထိရောက်ဆုံးသော ဆေးကုသခံယူခြင်းနည်းပညာကဏ္ဍတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဆေးကုသခံယူခြင်းနည်းစနစ်တွေ အူမကြီးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာတင်မကပဲ အခြားသောကင်ဆာရောဂါဝေဒနာမျိုးကိုပါ ကုသပေးနိင်ခဲ့ပါတယ်။ ။ ကင်ဆာရောဂါဟာ မျိုးဆက်စဉ်ဆက်အလိုက်ကူးစက်နိုင်တဲ့အတွက် နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်တွေမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်လိုက်နိုင်ခြင်းက လက်ရှိအချိန်မှာ အထိရောက်ဆုံးသော အူမကြီးရောဂါဝေဒနာဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုတစ်ခုဖြစပါတယ်။
ယခုနည်းစနစ်ဟာ ဆေးဝါးတွေမှ တစ်ဆင့် ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုပါ ထိထိရောက်ရောက်ပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးနေတဲ့အတွက် အခြားသော ကောင်းမွန်တဲ့ဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေခြင်း မရှိပါဘူး။ ယခုလို ဆေးကုသခံယူနည်းနှင့် ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကင်ဆာရောဂါတွေကို အထိရောက်ဆုံးပျောက်ကင်းအောင် ကုသနေတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒီနည်းစနစ်ဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုမိုနည်းပါးတဲ့အတွက် Chemotherapy အစား အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံဆေးပညာအဖွဲ့ဟာ ယခင်ကထက် ပိုမိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေများစွာနဲ့ ဆေးကုသခံယူနေတဲ့ လူနာတွေကို နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ စေလွှတ်စရာမလိုပဲ ကုသပေးနေနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ပ်တို့ဟာ လက်ရှိမှာ အရေးကြီးတဲ့ ဆဲလ် ၅၀ ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးနိုင်ပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါအမျိုး ၃၀ လောက်ကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်မှာ ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်တွေမှ လက်ရှိ နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲဖို့ အကြံပေးခြင်းနှင့် လူနာများ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အခြားသော ဆေးကုသခံယူခြင်းတွေကို တိကျစွာ တုန့်ဆိုင်းမှုမရှိပဲ အကြံပေးနေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်စေ အူမကြီးကင်ဆာရောဂါလက္ခဏာက ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားစပြုတဲ့ ပထမအဆင့်မှာ တွေ့ရှိမှသာ ကုသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကင်ဆာရောဂါကို Screening ပြုလုပ်ပြီး စစ်ဆေးခြင်းက အကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင် စစ်ဆေးခြင်းက အူမကြီးကင်ဆာရောဂါ ဆေးကုသခံယူခြင်းအချိန်ကာလ နည်းပါးနိုင်ခြင်း
တိုးတက်လာတဲ့ဆေးကုသခံယူနည်း တွေကြောင့် အူမကြီးကင်ဆာရောဂါကုသပြီး ပုံမှန်အခြေအနေကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက် ကြာရှည်တဲ့ကုသချိန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့အချိန်မှာလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ ခွဲစိတ်ပါရဂူကြီးတွေကြောင့် အူတွင်းခွဲစိတ်ကိရိယာ (သို့) အူတွင်းကြည့် ပိုက်ထည့်ပြီး ကုသမှုတွေကိုဆောင်ရွက်တာကြောင့် ပိုမိုလွယ်ကူလာခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါကိရိယာကို ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ သေးငယ်သောခွဲစိတ်အပေါက်မှ တစ်ဆင့်ထည့်သွင်းပြီး ရောဂါနှင့် ပတ်သက်သော လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေနှင့် ကုသမှုတွေကို ပြုလုပ်သွားနိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူအများကြီး ဖြစ်စေပါတယ်။ ယခင်အချိန်ကတော့ ရောဂါပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးဖို့အတွက် အကြီးစားခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုခံယူနေတဲ့လူနာဟာလည်း ဆေးရုံမှာ ၂ ပတ်ခန့် ဆေးကုသမှုကိုခံယူဖို့ လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိမှာတော့ အူတွင်း ပိုက်သွင်းကုသမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက် လူနာဟာ ဆေးရုံမှာ သုံးရက် (သို့) လေးရက်ခန့်သာ ဆေးကုသမှုကို ခံယူဖို့ လိုအပ်ပြီး ကုသမှုအားလုံးပြီးစီးသွားတဲ့ အချိန်ကာလာ တစ်ပတ်ကျော်မှာတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်နေထိုင်သွားလာစားသောက်နိုင်မှာပါပြီ။
ခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးနောက် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် နာလန်ပြန်ထူနိုင်ရေး
အူမကြီးကင်ဆာ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီး ခွဲစိတ်ခန်းမှာထွက်လာပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း လူနာအား အစားအသောက်များကို ရပ်တန့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူနာရဲ့ အစာခြေဖျက်နိုင်တဲ့ အနေအထားရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှသာ အရည်နဲ့ အစာပျော့တို့ကို သုံးဆောင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး အာဟာရများစွာပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေဟာ အူမကြီးခွဲစိတ်ကုသမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ လူနာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အာဟာရဓာတ်အပြည့်အဝရရှိနိုင်ဖို့က လူနာ၏ကျန်းမာရေး ပုံမှန်အခြေအနေပြန်လည်ဖြစ်တည်လာနိုင်ဖို့အတွက် အဓိကကျပါတယ်။ အစားအစာ အနည်းအများကိုတော့ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။
အူမကြီးကင်ဆာရောဂါလက္ခဏာတွေ့ရှိထားတဲ့ လူနာတွေအတွက်တော့ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကုသသွားမှာဖြစ်ပြီး အူတွင်းအကြိတ်၊ အသားပိုတွေ့ရှိပြီး ခွဲစိတ်ကုသခံယူခဲ့ရတဲ့ လူနာတွေအနေနဲ့ ပုံမှန်လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ အစားအသောက်ဂရုစိုက်ခြင်း၊ အနီရောင်အသားတွေနဲ့ အဆီများတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနဲ့ ပုံမှန်ဆေးစစ်ချက်များပြုလုပ်ခြင်း ကင်ဆာရောဂါအခြေအနေပိုမဆိုးရွားလာအောင် ကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
စံချိန်မှီတဲ့ ဆေးကုသနည်းပညာများနှင့် အူမကြီးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ထိထိရောက်ရောက် ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း
ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုးတိုကို ကုသတဲ့ ဆေးကုသနည်းများစွာရှိပါတယ်။ လူအများစုအတွက် ကင်ဆာရောဂါများ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသတဲ့ ဆေးကုသနည်းတွေဟာ ကင်ဆာအမျိုးအစား၊ ကင်ဆာရောဂါရဲ့ ကြီးထွားနေမှုအပေါ် မှုတည်ပြီး ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ အချို့သော အသုံးများတဲ့ ဆေးကုသနည်းတွေဟာ Chemotherapy (ဆေးသွင်းကုသခြင်း) ၊ Radiation Therapy (ဓာတ်ရောင်ခြည်ပြ ကုသခြင်း), Immunotherapy, hormone therapy (ဟော်မုန်းဆေးဖြင့် ကုသခြင်း) နှင့် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနည်းပညာများ ပါဝင်ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ယခုနည်းများကို ပေါင်းစပ်ပြီး လူနာများကို ဆေးကုသမှုခံယူစေတယ်လို့လည်း သိရှိရပါတယ်။
ယခုလိုမျိုး ဆေးပညာပိုင်းမှာ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ဆေးရုံများမှာ လူနာတွေကို ထိရောက်သော ဆေးကုသနည်းတွေနဲ့ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသလို့လာကြပါပြီ။ ယခုကုသနည်းဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တစ်ခုခြင်းစီမှာရှိတဲ့ ပျံ့နှံ့မှုတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အခြားဆေးကုသနည်းတွေထက် ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုနည်းစနစ်ဟာ အခြားသော Chemotherapy လိုမျိုး ဆေးကုသနည်းပညာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း သိသိသာသာကို နည်းပါးပြီး ထိရောက်တဲ့ စံချိန်မှီ ဆေးကုသနည်းတွေကို ကင်ဆာရောဂါမျိုးစုံကို ကုသနိုင်သလို အသက်အရွယ်မရွေး ကုသဖို့လည်း သင့်တော်ပါတယ်။
အူမကြီးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ကာကွယ်ခြင်း နှင့် ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ မိဘမျိုးရိုးစဉ်ဆက်ထဲမှာ အူမကြီးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့သူရှိရင် (ဒါမှမဟုတ်) ရင်သား၊ သားအိမ်၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ ပန်ကရိယ နဲ့ အသည်းခြေပြွန်တို့မှာ ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့သူရှိရင် အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အမျှင်ဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာများ စားသုံးမှုနည်းခြင်း၊ အနီရောင်အသားများ စားသုံးမှုများခြင်းနှင့် အခြားသော လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ inflammatory bowel disease လို့ခေါ်တဲ့ အူရောင်ရမ်းခြင်းတွေက အူမကြီးသွေးတွင်း ကင်ဆာရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရှိခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ အသည်းအဆီဖုံးခြင်း နဲ့ ကိုလက်စထရောများခြင်း စတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားနေရတဲ့သူတွေမှာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားဖို့ အလားအလာပိုများပါတယ်။
Assoc.Prof. Objoon Trachoo, M.D.